ဂျပန်နိုင်ငံ၏ သေဒဏ်ပေးခြင်း စနစ် - JAPO Japanese News
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ သေဒဏ်ပေးခြင်း စနစ်
ဟူး 11 Dec 2019, 13:03 ညနေ
သေမိန့်ဆိုပြီးတော့ လူတစ်ယောက်က အခြားတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ကို လုယူတာဟာ မှန်ကန်ရဲ့လား? ဆိုပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်နေပြီး၊ သေဒဏ်ပေးခြင်းကို မပြုလုပ်တော့တဲ့ နိုင်ငံတွေလဲ များလာပါတယ်။
သို့သော် ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ ယခုအချိန်ထိ သေမိန့်ဆိုတာ ရှိနေပါသေးတယ်။
လူအမြောက်အများကို သတ်လိုက်ရင်၊ ရက်စက်လွန်းတဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီး ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာ အကြောင်းပြချက် လုံးဝမရှိရင်၊ နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာဖောက်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုခု ပြုလုပ်ခဲ့ရင် သေမိန့်ပေးခံရပါတယ်။
သေမိန့်ချခံရတဲ့ တရားခံဟာ ဘယ်လိုကွပ်မျက်ခံရလဲဆိုတာ သိကြပါသလား?
တရားရုံးမှာ သေမိန့်ချခံလိုက်ရပြီဆိုတာနဲ့ ကွပ်မျက်မည့်နေရာ၊ သေဒဏ်ပေးတဲ့ ကိရိယာတွေရှိတဲ့ ထောင်လို နေရာမျိုးကို ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း ခံရပါတယ်။
ဆာ့ပိုရို၊ မိယဂိ၊ တိုကျို၊ နဂိုယ၊ အိုဆာကာ၊ ဟီရိုရှီးမား၊ ဟုခုအိုက စတဲ့ မြို့တွေထဲက တစ်ခုခုကို ခေါ်သွားပါတယ်။
ပြစ်မှုတစ်ခုတည်းကိုပဲ ကျူးလွန်ကြသူတွေကို တစ်ချိန်တည်း သေဒဏ်ပေးတဲ့အခါ တစ်နေရာထဲမှာ နှစ်ယောက်ထက်ပိုပြီး သေဒဏ်မပေးရဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် သေမိန့်ကျပြီး ဖြစ်ပေမယ့်လည်း စောင့်နေရပါသေးတယ်။
စောင့်နေရတဲ့အချိန်မှာ အပြင်လောကနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်တာတွေ၊ စာတွေ့ လူတွေ့လုပ်တာတွေကို ကန့်သတ်ခံထားရပါတယ်။ တွေ့ခွင့်ရတဲ့ လူတွေကိုလည်း ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
အရင်ဦးဆုံး မိသားစု၊ ပြီးရင် သေဒဏ်ချခံရသူကို စိတ်သက်သာအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြေရှိတဲ့ လူတွေဟာ တွေ့ခွင့်မရကြပါဘူး။
ပုံမှန် ပြစ်ဒဏ်ကျခံရသူတွေကတော့ ထောင်ကျနေစဉ်မှာ အဝတ်လျှော်၊ သန့်ရှင်းရေး၊ သစ်ခုတ်၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး စတာတွေ လုပ်ရပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ခိုင်းတာက ပြစ်ဒဏ်ကျခံသူတွေဟာ ထောင်ကလွတ်ရင် အပြင်လောကမှာ အလုပ်လုပ်စားနိုင်အောင် သင်ပေးတဲ့သဘောသက်ရောက်ပေမယ့် သေမိန့်ချခံရသူတွေကို ခိုင်းရတာကတော့ အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။
အဲ့ဒါကြောင့် ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်ရဘဲ အချိန်တွေကို ဒီအတိုင်းပဲ ကုန်ဆုံးခိုင်းစေပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ လက်ရှိ ဂျပန်မှာ ကွပ်မျက်တဲ့အချိန်အထိ ၃နှစ် ၄နှစ် ကြာစောင့်နေရတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဉပဒေအရ သေမိန့်ချပြီး ၆လအတွင်း သေဒဏ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပေမယ့်၊ တော်တော်များများက ၃နှစ် ၄နှစ် ကြာအောင် စောင့်နေကြရပါတယ်။
၁၉၈၀ပြည့်နှစ်များမှာ သေမိန့်ချပြီးမှ အသနားခံတာကြောင့် တရားရုံးမှာ ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး အမိန့်ရုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ သာဓက ၄ခုတောင်ရှိခဲ့ပြီး၊ ရှေ့လျှောက် ဒီလိုမဖြစ်အောင် သေသေချာချာလုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြစ်လိုက်တာကြောင့် အခုလိုအခြေအနေကို ရောက်သွားရတာပါ။
အခုအချိန်ထိ အသက်ရှင်နေသေးတဲ့ သေဒဏ်ကျသူများရဲ့ တစ်ဝက်ကျော်က အသနားခံစာတင်ထားတာကြောင့် ကွပ်မျက်တာကို ထင်သလောက် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
တစ်ဖန် သေမိန့်ကို တရားရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်က ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာ ဖြစ်ပေမယ့်၊ တာဝန်ယူပြီး အမိန့်မချချင်ကြတာကြောင့် သေမိန့်ကိုလည်း တော်တော်နဲ့ မချဘဲ၊ ကိုယ့်လုပ်သက်ကို မြန်မြန်ကုန်စေချင်နေကြတယ်လို့ ဝေဖန်ခံနေကြရပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့ လက်တွေ့သေဒဏ်ပေးတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးများလဲ?
သေဒဏ်ချခံရမည့်သူကို သေဒဏ်ပေးမယ့်ရက်ရဲ့ မနက်မှာ အသိပေးရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
မနက်ခင်း၊ ရုတ်တရက်ကြီး ထောင်တာဝန်ခံကရောက်လာပြီး အခန်းထဲကထွက်ဖို့ အမိန့်ပေးခံရပါတယ်။ ဒီနေ့ သေဒဏ်ချခံရမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ပေါ့နော်။
ပထမဦးဆုံး သွားရတာက (ခယောကိုင်း ရှိဆု) ဘုရားခန်းလို အခန်းမျိုးပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးလည်းလာသလို၊ ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာလည်း လာပါတယ်။
ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲ မေးပြီး ဘုန်းကြီး (သို့) တရားဟောဆရာနဲ့ စကားပြောပြီး သေတမ်းစာကို ရေးရပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မုန့်စားမလားလို့ မေးကြပေမယ့် စားမယ်ဖြေတဲ့လူကတော့ မရှိသလောက်ပါပဲ။
နောက်တစ်ဆင့် (ဇန်းရှိဆု) လို့ခေါ်တဲ့ အခန်းထဲကို ခေါ်သွားပါတယ်။
ဒီအခန်းထဲမှာ တရားဝင်သေမိန့်ချလိုက်ကြောင်း ပြောပြီး သေဒဏ်ကျခံရမည့်သူ၏ မျက်စိကို အုပ်ပြီး၊ လက်ထိပ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတာနဲ့ လိုက်ကာရဲ့တစ်ဖက်က (ရှိကိုးရှိဆု) သေဒဏ်ချမယ့် အခန်းထဲကို ခေါ်သွားပါတယ်။
တရားဝင်သေမိန့်ချရင် ထိုင်ပြီးနားထောင်ရတာဖြစ်ပြီး၊ သေဒဏ်ချခံရသူ တော်တော်များများကတော့ ပြန်မထနိုင်တော့ဘဲ ထောင်တာဝန်ခံတွေက ဘေးနှစ်ဖက်ကနေဆွဲထူပြီး ခေါ်သွားရပါတယ်။
ကိုယ်အသက်ခံရတော့မယ့် နေရာကို ရောက်နေပြီဆိုတာ သိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
အခန်းရဲ့ အလယ်တည့်တည့်က အနီရောင်ဘောင်ထဲမှာ ရပ်ရပြီး လည်ပင်းကို ကြိုးကွင်းလာစွပ်တာ ခံရပါတယ်။
လီဗာ ၃ခုရှိပြီး အဲ့ဒီ လီဗာ၃ခုထဲက တစ်ခုက ကြမ်းပြင်နဲ့ တကယ် ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အခန်းထဲမှာလည်းထောင်တာဝန်ခံ ၃ဦးရှိနေပါတယ်။ သူတို့၃ယောက်က တပြိုင်တည်း လီဗာကို ဆွဲလိုက်တာနဲ့ သေဒဏ်ချခံလိုက်ရပါပြီ။
နင်းထားတဲ့ အနီရောင်ကြမ်းပြင်က အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီး တင်းကြပ်နေတဲ့ ကြိုးက လည်ပင်းကို ဝါးမျိုလိုက်ပါတယ်။
အောက်ကိုကျသွားတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ကြိုးကြောင့် တစ်ချက်ပြန်ခုန်တက်လာသလိုဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီနေရာမှာပဲ တော်တော်များများ သေသွားကြပါတယ်။
တက်တာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်တက်ပြီး ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းကနေ အန်ဖတ်တွေ ထွက်လာတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်…
ခဏလောက် အဲ့အတိုင်းထားပြီး ဆရာဝန်က သေပြီဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုလိုက်တာနဲ့ သေဒဏ်ပေးပြီးသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလို့ ထောင်တာဝန်ခံ ၃ယောက်က လီဗာကို တစ်ချိန်တည်း ဆွဲချလိုက်တာလဲ?
အဲ့ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဘယ်သူကခလုတ်နှိပ်ပြီး သတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ မသိနိုင်တော့အောင် လုပ်တာပါ။
အလုပ်လို့ပဲပြောပြော၊ ကြီးလေးတဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူ လို့ပဲပြောပြော လူကလူကို ပြန်သတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကြီးကို တတ်နိုင်သမျှ မခံစားစေရအောင် လုပ်ထားတာပါ။
ဒီလိုနဲ့ ကွပ်မျက်သူ ၃ဦးရဲ့ အလုပ်က ပြီးသွားပါပြီ။
ပြီးတာနဲ့ အထူး အခွင့်အရေးအနေနဲ့ ယန်း၂သောင်းစီ လက်ခံရရှိကြပါတယ်။
သို့သော် အဲ့ဒီပိုက်ဆံကို သုံးနိုင်တဲ့သူကတော့ မရှိသလောက်ပါပဲ။
သေမိန့်ချခံလိုက်ရတဲ့လူအတွက် အလှူအတန်း ပြန်လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာ ပြန်သုံးကြပါတယ်။
လူက လူကိုပြန်သတ်တာက ရက်စက်လွန်းတယ်ဆိုပြီး ပြောကြသူများလည်းရှိပေမယ့်၊ အဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ကြောင့် ခံစားခဲ့ရတဲ့ လူတွေဘက်က စဉ်းစားကြည့်ရင်လည်း သေသင့်တယ်လို့ တွေးမိကြမှာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် သေမိန့်ဆိုတာ သေဒဏ်ချခံရသူဘက် တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ သေဒဏ်ပေးရတဲ့ လူပေါ်မှာလည်း အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားရစေပါတယ်။
သေဒဏ်ပေးခံရလောက်တဲ့အထိ ကြီးလေးတဲ့ ရာဇဝတ်မှုမျိုး မကျူးလွန်အောင် လုပ်တာက အကောင်းဆုံးပဲလို့ ထင်ပါတယ်။